Igumbi lokulala eliphindwe kabini kwiFama yoMculo wesiNtu ♪
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguLaura
I-94% yeendwendwe zakutshanje inike uLaura iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
UKUVULA KWAKHONA NGE-2 JUNI :). Nceda uqaphele ukuba ukhuseleko ngexesha lobhubhani we-Covid, kukho utshintsho oluthile ekufikeleleni kwiindwendwe. Jonga icandelo 'loFikelelo lweeNdwendwe' ngezantsi.
Yiza uhlale kwindlu epholileyo yasefama eneempawu ezininzi zantlandlolo. Ukuba uthanda ubuhle bendalo, uxolo kunye nokuzola ngoko ungajongi. Ndibekwe kumgama oziikhilomitha ezi-2 ukusuka kwilali yase-Corofin kunye neNdawo yoLwazi lwePaki yeSizwe yaseBurren.
Indawo yakho yokuhlala ligumbi elihle eliphindwe kabini kwikhaya elakhiwe ngo-1930's, elineebhedi ezi-3 zasefama. Indlu ineempawu ezininzi zantlandlolo - iisilingi zobude obugcweleyo, iindawo zomlilo kwigumbi ngalinye lokulala (ngoku elihonjisiweyo), umgangatho weplanga, iingcango ezinephaneli kunye neepaneli ezijikeleze iifestile. Kwigumbi eliphambili kukho uluhlu lwe-1950 oluhlaziyiweyo lwe-Rayburn-fuel olubonelela ngobushushu obukhulu (kukho ukufudumeza okusembindini kwe-oyile ngokunjalo). Umgangatho ngoweLiscannor flagstone yendawo. Indlu yakhiwe ngumakhi wendawo kunye nomdlali wefiddle weKilfenora Céilí Band uTom Ward; Akumangalisi ke ukuba igumbi eliphambili linesandi esikhulu sokudlala umculo!
Indlu yasefama yohlulwe phakathi. Iseti .7 yeemayile ukusuka endleleni, uxolo noxolo alunangxaki. Igumbi eliphambili lijonge ngaphaya kwenxalenye yoMmandla woKhuselo oluKhethekileyo we-Corofin Wetlands, indawo yokuzimela izilwanyana zeentaka – ngakumbi i-whooper swans ekwindla/ebusika.
ULaura, umamkeli wakho, udlala umculo wesintu waseIreland kwifiddle kwaye uneBA kuMculo waseIrish noMdaniso osuka kwiDyunivesithi yaseLimerick. Ngo-2016 wamisela iiHolide zeBurren Fiddle kwaye unokufundisa i-fiddle kwiindwendwe-ukusuka kwabaqalayo abagqibeleleyo ukuya kubadlali abaphambili.
Ubume bendawo ejikeleze iCorofin bubuhle bohlukeneyo. Kwangoko ejikeleze indlu kuqengqeleka amasimi aluhlaza kunye neendonga ezicocekileyo zekalika - ezi zinika indlela eya kwiiCliffs kunye nonxweme lwasendle lweAtlantiki, ilitye lekalika leenduli zeBurren emantla kunye neenduli eziluhlaza zaseMpuma Clare.
Ukuba uyazi ukuba ujonge phi, kukho iseshoni yomculo wesintu phantse ubusuku bonke beveki ngaphakathi kwesiqingatha seyure seyure yendlu :).
Indlu ikumgama wemizuzu engama-25 ukusuka kwi-Wild Atlantic Way eLahinch. Yiyure enye nemizuzu engama-30 ukusuka kweyona ndawo ikude yonxweme lwaseClare kwiLoop Head. Kumgama oziikhilomitha ezili-100 zonxweme lwaseClare, iidolophu kunye neelali oza kuzihlola, emnyango :).
I-Bofey Quinn's (i-pub/restaurant) yindawo yokutya kwilali yase-Corofin. Uyimizuzu engama-20 kude ne-Ennis, idolophu yedolophu yaseClare. Ngabemi abamalunga nama-25,000 kukho iikhefi ezininzi, iindawo zokutyela kunye nezinto ekufuneka zenziwe.
Amaxesha okuhamba ukusuka endlini:
I-Corofin (iNdawo yoLwazi lwePaki yeSizwe yaseBurren): imizuzu emi-5,
Burren National Park Trailhead (Gortlecka Crossroads): imizuzu eli-15,
IiCliffs zikaMoher: imizuzu engama-30,
Ennis: imizuzu engama-20,
Isikhululo seenqwelomoya saseShannon: imizuzu engama-40,
Galway: 1 iyure,
Limerick: 1 iyure,
Ukuphumla: imizuzu engama-20,
I-Doolin (kunye nephenyane eliya kwiziqithi zaseAran): imizuzu engama-30
Ndinikezela ngesidlo sakusasa selizwekazi oko kukuthi, isonka esithosiweyo sesonka esenziwe ekhaya, ijam, i-spreads, igranola, i-cereal, iziqhamo, iti, ikofu evela kumatshini wokushicilela waseFransi. Ndizakubekela yona ngentsasa yokuqala kwaye ndiqinisekise ukuba uyazi apho yonke into ikhoyo! Ndisebenzisa umatshini wesonka ukuze isonka sihlale sisitsha kangangoko.
Ukuba ujonge izinto zokwenza kwindawo ndingakunika iingcebiso kunye nolwazi lwendawo. Ndiyakuthanda ukuba ngaphandle kwaye ndonwabile ukucebisa ukuhamba eBurren kunye nezikhumbuzo zomdla. Ngokulinganayo ndonwabile ukuhlonipha ubumfihlo bakho ukuba oku kuyakhethwa.
Kukho i-intanethi apha ukuba ufuna ukukhangela amaxesha okuvula / amaxesha ebhasi njl.
Ndinikezela ngesidlo sakusasa selizwekazi oko kukuthi, isonka esithosiweyo sesonka esenziwe ekhaya, ijam, i-spreads, igranola, i-cereal, iziqhamo, iti, ikofu evela kumatshini wokus…